युगसम्बाद साप्ताहिक - बलिदानीको कदर नहुने देश
बलिदानीको कदर नहुने देश
Monday, 02.02.2015, 06:44pm (GMT+5.5)
‘खोलो तर्याे लौरो बिस्र्यो’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति यतिबेला नेपाली राजनीतिमा निकै चरितार्थ भएको छ । जसको बलिदानीका कारण नेताहरू अहिलेको हैसियतमा आइपुगेका छन् उनीहरूको संघर्ष, त्याग र राष्ट्रभक्तिलाई स्मृतिमा राख्न सकेनन् । मुलुकको एकता छिन्नभिन्न पार्ने शहीदको संघर्षको एजेण्डा थिएन । शहीदहरूले मुलुक टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर भनेका छैनन्, मुलुकमा विदेशी हैकम बढ्न देउ पनि भनेका छैनन् । राजनीतिक नेताहरूबीच सत्ता र कुर्सीकै मात्र खेल भैरहोस् पनि भनेका छैनन् । शहीदको सपना नेपाल र नेपाली जनताको सुख, शान्ति र समुन्नति मात्रै थियो । तर त्यसैलाई जिम्मेवारी लिएकाहरूले लत्याइरहेका छन् । नेपाल र नेपालीको कल्याणका लागि शहीदहरूले देखाएको मार्गलाई पछ्याउनुको साटो दुत्कारिएको छ ।
नेपाली जनताले २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा ठूलो कुर्वानी गरे । तर युगान्तकारी परिवर्तनका ती घटनापछिका राजनीतिक परिघटनाले राष्ट्रिय चिन्तनधारको मूलबाटो समात्न सकेनन् । नेपालको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन । नेपालका राजनीतिक नेताहरूको सत्ता लोलुपताको कमजोरी बुझेका वैदेशिक शक्तिहरूले मौकापरस्त भूमिका खेल्दै उनीहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति अपनाए ।
राष्ट्रको चौतर्फी हितका लागि आवाज बुलन्द गर्ने शहीदहरूको शरीर नासिए पनि उनीहरूको आत्मा जीवितै छ, उनीहरूको विचार जस्ताको तस्तै जहाँको तहीँ अमर छ । अभाव त्यो विचार र सपनाको पूर्णता मात्र हो । अहिले मनमा थोरै मात्र राष्ट्रिय चिन्तन हुनेहरू ती महान् आत्माहरू झल्झल्ति सम्झिरहेका छन् । तर शहीदहरूकै वलिदानीबाट सत्तामा पुगेका र आफूलाई नेता बनाउन पाएकाहरूले केवल वर्षमा एकपटक मात्र शहीदको सम्झना गर्छन् त्यो पनि अपगालबाट बच्न र जनतामा भ्रम छर्न । बाँकी समय आफ्नै स्वार्थमा रमिरहन्छन् । प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यो अवधिमा शहीदको आत्मसम्मान गरिने खालका कुनै कार्यक्रम लागू गरिएन । उनीहरूलाई केवल वर्षको एकचोटी स्मरण गर्ने ‘कुलदेवता’का रुपमा मात्र प्रतिस्थापित गराइयो । यसैकारण त मुलुक अहिलेको यो नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
आज मुलुक चौतर्फी संकटमा छ । आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू बाह्य इशारा र निर्देशनमा मुलुक ध्वंश गर्ने बाटो अख्तियार गरिरहेका छन् । देशको अवस्था विकराल छ, राष्ट्रियता चारैतिरबाट प्रहारको निशाना बनिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ त्यसै त्यसै विलिन हुन पुगेको छ । राजनीतिक रुपमा मुलुक प्रतिक्षण क्षयोन्मुख अवस्थामा छ भने आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको वर्णन गर्नै नसकिने भैसकेको छ । इमान्दारिता, सदाचार, नैतिकता हराइसकेको छ । आफू र आफ्नो वाहेक हामी र हाम्रो भन्ने भावना मरिसकेको छ । नेपालीको विशेषता नै बनेको ‘अनेकतामा एकता’ अहिले ‘एकतामा अनेकता’को रुपमा फोस्रो नारा भएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा महान् शहीदहरूका आत्मा कति रोएको होला ? त्यसतर्फ विचार पुर्याउने कसले ? दिन प्रतिदिन पतनोन्मुख अवस्थामा गुज्रिएको यो मुलुकको उत्थानका लागि अब शोभा भगवती, सिफल र टेकुमा उभिएर शपथ खानु परेको छ । हिजो गरेका गल्ती, कमजोरीलाई सच्याउँदै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्दै आफूलाई त्यसैमा समाहित गर्ने प्रण गर्नुपरेको छ ।
महान् शहीदहरूले आफ्नो प्राणको आहुति अहिलेकै जस्तो अवस्था आउनको लागि दिएका होइनन् । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको अवमूल्यन हुँदैआयो र परिवर्तनकामी जनताका आकाङ्क्षाहरू उपेक्षित हुँदैगए । कहिल्यै स्वतन्त्रता नगुमाएको नेपाल आज वैदेशिक शक्तिहरूको खेलमैदानमा परिणत भएको छ र राष्ट्रिय एकता र अखण्डता नै जोगाउन धौधौ पर्न थालेको छ । बाहिरी शक्तिको बुइ चढेर बुर्कुसी मार्ने राजनीतिक कसरतले कथित मूलधारको राजनीति गतिहीन, दिशाहीन र कान्तिहीन भएको छ । मुलुक राजनीतिक छलकपट, बाहिरी षड्यन्त्र र सत्तास्वार्थको संकीर्णताले दग्ध भएको छ । राष्ट्रहितको साझा लक्ष नै छैन । सत्तालोलुप नेताहरू नेपथ्यबाट निर्देशित भएर राजनीतिक रंगमञ्चमा उत्रिएका छन् र विध्वंश र विघटनको निम्ति खलपात्र बनेका छन् । राष्ट्रिय चेतना शून्यबिन्दुमा झरेको छ । शहीदका सपनाहरू मुर्झाइसकेका छन् ।
राष्ट्रको समुन्नति, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र एकता सपुतहरूको त्याग र बलिदानीवेगर सम्भव हुँदैन । राष्ट्रका लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिनेहरूलाई शहीद भनिन्छ । यिनै शहीदको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रुपमा ‘शहीद सप्ताह’ भनेर चार महान शहीदहरूको शालिकमा गएर माल्यार्पण गरियो । औपचारिकतामा सीमित शहीद दिवसले कसैलाई झक्झक्याएको पनि छैन । किनभने आज दलपिच्छेका शहीद, जातपिच्छेका शहीद, सम्प्रदायपिच्छेका शहीदको लर्को लागेको छ । जे भए पनि ज्ञात–अज्ञात रुपमा मुलुकका लागि संघर्ष गर्ने र बलिदानी दिनेको अवमूल्यन गर्नहुँदैन । यिनैको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ र यस वर्ष पनि अर्को एउटा औपचारिकता पूरा भयो ।